रियल स्थानान्तरणबारे बोल्दै नेमारले भने “पिएसजी मै खुशी छु” – Khel Dainik
रियल स्थानान्तरणबारे बोल्दै नेमारले भने “पिएसजी मै खुशी छु”
एजेन्सी । ब्राजिलियन स्टार नेमारले रियल मेड्रिडमा अनुबन्ध हुने सबै अनुमानहरुलाई लत्याउँदै आफू पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) मै खुशी रहेको बताएका छन् ।
पोर्चुगिज स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो युभेन्ट्सतर्फ लागेपछि रियल अहिले नयाँ स्टारको खोजीमा छ र उसको नजरमा यी ब्राजिलियन स्टार नै पहिलो विकल्पका रुपमा रहेका छन् ।
केही रिपोर्टहरुले यसअघि रियलका आधिकारिक प्रतिनिधिहरु सान्तोष पुगेको र नेमारका पितासँग उनको सम्भावित स्थानान्तरणलाई लिएर कुरा गरीरहेको बताइएको थियो ।
Neymar Jr confirmed that he will remain at PSG next season so he can achieve his objectives. pic.twitter.com/HgsGcx6HEV
— Brazil Football  (@BrazilEdition) July 20, 2018
नेमार गत सिजन मात्र बार्सिलोनाबाट २२२ मिलियन युरोको विश्वकिर्तिमानी रकममा पिएसजीमा आवद्ध भएका थिए । पिएसजीसँग नेमारको अझै ५ बर्षको सम्झौता छ र उनको कन्ट्रयाक्टमा कुनै बाई आउट क्लज छैन ।
नेमारले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, “म रोकिरहनेछु र पेरिस मै रहनेछु । मेरो क्लबसँग अझै सम्झौता छ । मिडियाहरुको काम नै कथा बनाउनु हो र उनीहरु मेरो भविष्यबारे अनुमान लगाईरहन्छन् । तर यो निकै बोरिङ छ । सबैलाई थाहा छ कि म पिएसजीलाई माया गर्छु ।
क्लबका अध्यक्ष, समर्थक र सबैलाई थाहा छ म पेरिस किन आएको थिएँ । म पेरिसमा एउटा नयाँ चुनौतिका लागि आएको थिएँ र म एउटा नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छु । मलाई विश्वास छ आगामी सिजन सफल हुनेछ ।”
Neymar Jr – “I will continue in Paris. I haveacontract and I came forachallenge, for new things, to achieve an objective. And it has not changed, I hope it isasuccessful season.” pic.twitter.com/kuWelJdT0h
आफ्नो क्लब टिममेट किलियन एम्बाप्पेबारे नेमारले भने, “किलियन अविश्सनीय छन्, जुन मानिसहरु उसँग काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई किलियनको क्वालिटी थाहा छ । म उनको लागि निकै खुशी छु, किनकी उनको विश्वकप यात्रा शानदार रह्यो । हामी सधै कुरा गर्छौं ।”
← शानदार जितका साथ फ्रान्सको सम्भावना कायमै (भिडियोसहित) यदि जर्जिन्हो सिटीमा आवद्ध भएको भए त्यो उनको गल्ती हुने थियो : गार्डिओला →